musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Bangkok inoda yayo Yekushanya Sandbox
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Bangkok Yekushanya Sandbox
Chikamu chakazvimirira cheThailand chiri kukurudzira Bangkok Tourism Sandbox modhi, ichitarisira kuvhurwa kwemabhizinesi, asi nevatengi vakaganhurirwa kune vakabaiwa.
Sangano rakazvimiririra rakurudzira matanho matatu ekuvhura mabhizinesi, kusanganisira kusimudzira mabhizinesi anoteedzera marongero ekudzivirira kweCoronavirus uye nhomba yekudzivirira 3% pakati pevashandi.
Chechipiri chikumbiro ndechekushandisa Dhijitari Hutano Pass kune vatengi vakabaiwa majekiseni.
Chirongwa chechitatu ndechekutanga chirongwa chekutyaira mune mamwe mabhizinesi ekutengesa anozviti akagadzirira kuvhurazve, zvichitevera matanho akaomarara.
Sekureva kwa Sanan Angubolkul, Mutungamiri we Thai Thai Chamber of Commerce, vemasangano akazvimiririra vakurudzira matanho matatu ekuvhurazve mabhizinesi, kusanganisira zviyero zvakaita se SHA + (SHA PLUS), kusimudzira mabhizinesi anoteedzera nhungamiro dzekuchengetedzwa kweCoronavirus uye chiyero chekudzivirira che 3% pakati pevashandi. Iyo Sha Plus modhi parizvino iri kushandiswa muPhuket Sandbox chirongwa.
Chechipiri chikumbiro ndechekushandisa Dhijitari Health Pass yevatengi vakabayiwa jekiseni, vachishandisa dhatabhesi reHurumende Hutano, nekutambira vatengi vanogona kuratidza mhedzisiro yeATK bvunzo, kuitira kuti avo vanogona kudaro, vanzwe vakasununguka kushandisa masevhisi. emabhizimusi iwayo
Izvo zvakataurwa "Dhijitari Hutano Kupfuura"Inogona kushandiswa nevanhu vakabayiwa majekiseni ane ruzivo rwakanyorwa mu" Chiremba Vakagadzirira "kana" Moh Prom "chikumbiro, chinoshanda kune avo vakazvinyoresa ivo pachavo kune jabs dzakapihwa nehurumende.
Chirongwa chechitatu ndechekutangisa chirongwa chekuchaira mune mamwe mabhizinesi ezvitengesi anozviti akagadzirira kuvhurwa uye anokwanisa kutevedzera matanho.
Kana zviri zveindasitiri indasitiri, "Factory Sandbox" modhi yatove kushandiswa kupatsanura vashandi vane hutachiona uye kuvapa jekiseni kuti vawedzere kuvimba mubato rekutengesa kunze.
Yakatangwa muna Chikunguru 1, 2021, iyo Phuket Sandbox inogonesa vakazara-vachengetwa vashanyi vekunze kuti vabhururuke vakananga kwavanogara uye vagare pachitsuwa chisina gomarara. Mahotera anofanirwa kuve nechokwadi chekuti makumi manomwe muzana evashandi vavo vagamuchira majekiseni - chiyero chakaenzana chehuwandu hwevanhu vePhuket, zvichigadzira boka rekudzivirira hutachiona hwe COVID-70. Kunyange danho repamusoro rekudzivirira risingatadzise vanhu kubata COVID-19, zvinonyanya kudzora mukana wehutachiona hwakakomba nekuchipatara.
Mutevedzeri Gavhuna wePhuket, VaPiyapong Choowong, vakati: "Ndinoda kuratidza kuti tinotsigira Phuket Sandbox. Tiri kuve nechokwadi chekuti vanhu pachitsuwa ichi uye vashanyi vese vakachengeteka saka tinokwanisa kumhanyisa Sandbox zvakanaka uye nekuenderera mberi nekugamuchira vamwe vashanyi kuPhuket. ”
IceCure Medical yakapinda mukutanga kugovera ...
Shangu Zvese-Zvinosanganisira Zororo: ZveMhuri Yese!
Zviuru zvakabatiswa seSouthwest yakadzima mazana emamwe ...
COVID-19 yekudzivirira ikozvino inosungirwa kune ese Air Canada ...